We.com.mm - တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေအတွက် Boyတွေ ကြွေဆင်းသွားစေမယ့် ဆံပင်ပုံစံ (၇) မျိုး…။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေဆိုတော့ အရောင်အသွေးအစုံအလင်နဲ့လှပနေကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေပေါ့…။ Stage ကျောင်းမှာတုန်းက သိပ်ပြီးအလှတွေပြင်လိုမရပဲ ရိုးရိုးလေးနေခဲ့ရပြီး တက္ကသိုလ်တွေလည်း တက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ အကုန်လုံးကလှသွေးတွေကြွယ်ပြီး တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ လှနေကြမှာပါ…။ မြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေက များသောအားဖြင့် မြန်မာလိုပဲ ဝတ်ဆင်ကြရတာများပါတယ်…။ ဒီတော့ တက္ကသိုလ်တက်မယ့်ညီမလေးတွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းပြီး မြန်မာအင်္ကျီလေးတွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
၁. ဒီပုံစံလေးက ဆံပင်အတိုဆိုပေမယ့်လည်း ခပ်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ မြန်မာအင်္ကျီလေးတွေနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်စတိုင်မျိုးလေးပါ…။ ဆံပင်အတိုလေးတွေကိုမှာ လိမ်လိမ်လေးတွေလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာအင်္ကျီနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ်နေမှာပါ…။
ဒါကတော့ ဆံပင်အရမ်းမရှည်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် အရမ်းလည်းမရိုး၊ အရမ်းလည်းမဆန်းတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လေးပါ…။
၂. ဒါလေးကတော့ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကောင်မလေးတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဆံပင်ပုံစံလေးပဲပါ…။ ဆံပင်ရှည်လေးကို ကပိုကရိုလေးစည်းပြီး ဘေးဘက်နားလေးကနေ ကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်ပေးလိုက်ရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cute Look လေးပေါ်သွားမှာပါ…။
မြန်မာအင်္ကျီလေးနဲ့ မလိုက်ဖက်မှာတော့မပူနဲ့နော်…။ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ မြင်သူတိုင်းကငေးသွားမယ့် ဆံပင်စတိုင်လေးပါနော်…။
၃. ကိုရီးယားဆန်ဆန်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်မျိုးလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်စတိုင်လေးပေါ့…။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လှပနေမယ့် ဆံပင်စတိုင်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်…။
တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့လည်း မြန်မာအင်္ကျီလေးနဲ့လည်း ဒီဆံပင်စတိုင်ကလှပနေသလို အပြင်တွေသွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မုန့်သွားစားတဲ့အခါမှာလည်း ဒီဆံပင်စတိုင်လေးက လှပနေအုန်းမှာပါပဲ…။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်စတိုင်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး…။
၄. မိန်းကလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အသွင်လေးကိုဖန်တီးပေးမယ့် ဆံပင်စတိုင်မျိုးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး…။ ဆံပင်ထူထူလေးရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်…။
မြန်မာအင်္ကျီလေးနဲ့ ဒီလိုဆံပင်စတိုင်မျိုးလေးဆိုရင်တော့ ယောက်ျားလေးတွေမပြောနဲ့ မိန်းကလေးတွေတောင် ကြွေဆင်းသွားတာ ခံရမှာပါနော်…။
၅. ဆံပင်ကိုလည်းမစည်းချင် ကပိုကရိုလေးနဲ့ ဆံပင်လေးကိုချထားချင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် ဒီဆံပင်စတိုင်လေးက အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။ ရှေ့ဆံပင်တစ်ဝက်လောက်ကိုပဲ ကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်ပေးလိုက်ရင်တော့ အရမ်းကို လှသွားပါပြီ…။
ဆံပင်ကအဖြောင့်ဆိုရင်တော့ အောက်ဖျားလေးတွေကို အနည်းငယ်လိမ်ပေးလိုက်ရင်တော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး စတိုင်ကျတဲ့ဆံပင်စတိုင်မျိုးလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်…။
၆. ဘိုဆန်ဆန်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးပါ…။ အပြင်အင်္ကျီလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအင်္ကျီလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်းလေးပါ…။ မြန်မာအင်္ကျီရိုးရိုးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်ဆဲ့ ဆံပင်စတိုင်လေးနော်…။
လုပ်ကြည့်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်လိုက် နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာကြလိမ့်မယ်…။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကောင်မလေးတွေအတွက် အရမ်းကို လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်စတိုင်လေးပါနော်…။ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးကိုမှ ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင် ကောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးကိုမှ ဒီလိုဆံပင်အကောက် လှိုင်းလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရုပ်မလေးလို့တောင်အများက ထင်ကြမှာပါနော်…။
ကိုရီးယားဆန်ဆန် အဝါရောင်ဖက်ရှင်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူလန်းကြမယ်
Unicorn Crazy လေးတွေအကြိုက်တွေ့မယ့် ချစ်စရာ Unicorn တက်တူးဒီဇိုင်းများ
Girly Type တွေဝတ်ရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အမိုက်စားဖက်ရှင်စတိုင်လ်များ